Lix bilyan oo koron oo loo qoondeeyey iskuulka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka tacliinta Gustav Fridolin (MP) oo soo ban-dhigaya akhbaar miisaaniyad. sawir: Alexander Larsson Vierth/TT
Lix bilyan oo koron oo loo qoondeeyey iskuulka
"Waxaa lagu dhimi doonaa sinaan-darrada iskuullada"
La daabacay torsdag 14 september 2017 kl 16.59
Dawladda ayaa ku talo jirta sidii miisaaniyadda loogu hir-gelin lahaa taageero lix bilyan gaarsii-san ee iskuullada.
Miisaaniyaddaa ayaa lagu qeybin doonaa iyada oo loo eegeyo baahida loo qabo sidii lagu gaari lahaa goolka ah tacliin loo siman yahay ee wax-barasho.
–Ma aqbali doono cadaalad darrada iskuullada Sweden. Guddiga iskuulladu wuxuu si cad u qeexay in loo baahan yahay dawladdu inay gacan ka geeysato sidii lagu heli lahaa tacliin loo siman yahay. Iminka waxaan hir-gelin doonnaa go’aankii ugu horeeyay ee guddiga wax-barashada (Skolkommissionen), iyada oo ay dawladdu gacan ballaaran ka geeysaneyo sidii dakhliga loo qeyb-san lahaa si cadaalad ah, sida qoraal saxaafadeed ku sheegay wasiirka wax-barashada, Gustav Fridolin.
Maal gelintan ayaa ah, sida uu Fridolin u qeexay hayadda wararka Sweden ee TT, 1,5 bilyan 2018, 3,5 bilyan 2019 iyo illaa 6 bilyan 2020.
Suxufiyadda Katarina Helmersson oo ka howl-gasha laanta wararka ee Ekot ayaa sheegtay:
–Fikirkan waxaa horay loogu soo ban-dhigey toddobaadkii siyaasadda ee Järva, bishii juun. Warka cusubi wuxuu yahay inaan wax lacag ah la kala wareejineyn. Waa maal-gelin hor leh.
–Waxaa dhabbadeedii lagu taagan yahay sidii loo hir-gelin lahaa fikraddii guddiga wax-barashada. Waxaa iskuullada lagu adkeeyn doonaa lix bilyan oo koron. Waxay macnaheedu tahay in iskuullada lagu maal-gelin doono 1,5 sannadka 2018 illaa laga gaaro heerka lix bilyan oo koron sannadka 2020.
Maxaa lagu qaban doonaa lacagtan?
–Waxaa lagu bixin doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa sinaanta wax-barashada. Waxaa dhaqaalahaa loo qeeybin doonaa tusaale ahaan iskuullada ku yaala xaafadaha ey ku nool yihiin dabaqadaha hoose (xaafadaha tacbaanka ah). Dawladda ayay ula muuqataa inay kor u kacday sinaan darrada iskuullada, waana arrin uu ururka OECD horay farta ugu fiiqay kolka laga hadleyo iskuullada Sweden.
Wakhti loo qoondeeyey miyaa jira?
–Haa, 1,5 bilyan 2018, 3,5 bilyan 2019 iyo 6 bilyan 2020 ayay tahay in la gaaro dhismihiisa. Hase yeeshee sida la ogsoon yahay sannadka foodda innagu soo haya ayaa ah sannad doorasho, wayna adag tahay in laga faaloodo waxa dhici doona wixii ka dambeeya waxa dhici doona.